I-Nasdaq 100 yooVimba-Funda ukuRhweba
tag: I-Nasdaq 100
I-NAS100 iqhubela phambili i-Bearish Run, i-May yehle ukuya kwiNqanaba le-13644
I-NAS100 ikwinyathelo elihlayo kodwa linokuhla liye kwinqanaba le-13644 .Isalathiso sophule umgangatho wangaphambili we-14356. Oku kubonisa ukuba imarike iya kuhla ngakumbi ukuya phantsi. Uxinzelelo lokuthengisa luya kufikelela kwindawo ephantsi ye-13834. Nangona kunjalo, izikhombisi zexabiso zibonise ukuba imarike ifikelele kwi-oversold region. Ukuya ezantsi okunye kuyathandabuzeka.
Isalathiso sikwinqanaba le-26 leNdlela yoBulunga bexesha le-14. Isalathiso sayo sifikelele kwingingqi ethengiswa kakhulu. Uxinzelelo lokuthengisa lunokufikelela ekuphelelweni kwe-bearish. Imivalo yexabiso ingaphantsi kwe-50-day SMA kunye ne-21-day SMA ebonisa ukunyuka okungaphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-21 zithambekile ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwintshukumo esezantsi. Okwangoku, ngoJanuwari 10 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba isalathisi siya kuwela kwinqanaba le-2.0 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-13644.68.
Iiyure ezingama-4 Iimpawu zetshathi Reading
Isalathisi singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ifikelele kwingingqi ethengisiweyo. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-NAS100 iye yaqhubeka ihla inyuka kodwa inokuhla ukuya kwinqanaba le-13644. Uxinzelelo lokuthengisa lunokuthi luqhubeke njengoko ikhefu lexabiso lingaphantsi kwexabiso eliphantsi. Imingcipheko yesalathiso iyancipha ngakumbi ukuya kwinqanaba le-13600.
I-NAS100 irhweba ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo kodwa imingcipheko iyancipha ngakumbi ngaphantsi kwe-15500. Ukususela nge-4 kaJanuwari, isalathisi siye sahla. I-NAS100 yawela kwinqanaba eliphantsi le-15000 kodwa yabuyela kwinqanaba le-15300. Okwangoku, i-altcoin iwile kwaye iphinda ihlaziye inkxaso yangaphambili kwinqanaba le-15504. Isalathiso siya kuncipha ngakumbi ukuba silahlekelwa yinkxaso yangoku kwinqanaba le-15500. Imarike iya ukuhla ukuya kwinqanaba elisezantsi le-14356.
Isalathiso sikwinqanaba le-42 le-Relative Strength kwixesha le-14. I-NAS100 ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Imivalo yexabiso ingaphantsi kwe-SMA ye-50 kunye ne-21-day SMA ebonisa ukuhamba phantsi. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-21 zithambekile ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwintshukumo esezantsi. Ngomhla we-14 kaJanuwari, isalathisi sawela kwinqanaba eliphantsi le-15246 kwaye lihlehliselwe umva. Okwangoku, ngo-Januwari 17 uptrend, umzimba wekhandlela obuyiselweyo wavavanya i-61.8% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba isalathisi siya kunyuka kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extension okanye inqanaba le-15770.76.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-30% yestochastic yemihla ngemihla. Ikwisantya esiphezulu. Ixabiso lesalathisi lingaphantsi kwemiyinge ehambayo eyenza i-NAS100 ithande ukuwa. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-NAS100 isengaphantsi kwe-avareji ehambayo kodwa imingcipheko iyancipha ngakumbi ngaphantsi kwe-15500. Ukunyuka okuya phezulu kunokwenzeka ngenxa yokuba isalathiso sifikelele kwindawo ethengisiweyo yentengiso.
I-NASDAQ100 iSlumps ngaphezu kweNqanaba le-15506, ayikwazi ukuphula iNqanaba le-16400
I-NAS100 iye yawa kakhulu kwi-downtrend kodwa ayikwazi ukuphula inqanaba le-16400. Isalathiso sikwicala lokuhamba ngaphantsi kwe-16400 ukuxhathisa phezulu. Ngomhla we-4 kaJanuwari, i-NAS100 yajongana nokuchaswa kwinkcaso ephezulu. Imarike yehla ngokukhawuleza ukuya kwinqanaba eliphantsi elingaphezulu kwe-15506. Nangona kunjalo, kwisenzo samaxabiso angaphambili, isalathisi siye sawela ngaphezu kwenkxaso yangoku kwaye yaphinda yaqala phezulu. Ukususela ngoNovemba, i-NAS100 iye yatshintsha phakathi kwamanqanaba e-15500 kunye ne-16400. Namhlanje, isalathisi sinokufumana inkxaso ngaphezu kwenqanaba le-15500.
Isalathiso sikwinqanaba le-38 le-Relative Strength kwixesha le-14. I-NAS100 ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Imivalo yexabiso ingaphantsi kwe-SMA ye-50 kunye ne-21-day SMA ebonisa ukuhamba phantsi. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-21 zithambekile ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwintshukumo esezantsi. Isalathiso sifikelele kwinqanaba eliphantsi le-15506. Okwangoku, ngoJanuwari 5 downtrend, i-candle body retraced yavavanya i-78.6% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathisi siya kuwa kodwa sibuyele kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-15375.33.
Isalathisi singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-NAS 100 iwele kwindawo ethengisiweyo yentengiso. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-NAS100 iye yaguquguquka ngaphezu kwenqanaba le-15500 kodwa ayikwazi ukuphula inqanaba le-16400. Isalathiso siye sahlanganiswa phakathi kwamanqanaba 15500 kunye ne-16400.
I-NASDAQ ye-100 iFaces Rejection kwiNqanaba le-16607, iqala kwakhona ukuthengisa uxinzelelo
Isalathiso seNAS100 arhweba ngendlela esecaleni kwaye aqalise kwakhona ukuthengisa uxinzelelo. I-uptrend ngoNovemba 15 yaphazamiseka njengoko isalathisi siphinde saqala ukuhla. I-NASDAQ 100 yehla ukusuka kwinqanaba eliphezulu le-16627 ukuya kwinqanaba eliphantsi le-15504. Ukususela ngoko i-uptrend iye yakhawulelwa ngaphantsi kwenqanaba le-16400. Isalathisi ngoku siguquguquka phakathi kwamanqanaba e-15300 kunye ne-16400. yaphulwa.
I-NAS100 ikwinqanaba le-61 ye-Relative Strength kwixesha le-14. Ibonisa ukuba i-NAS100 ikwindawo ye-bullish ye-bullish kwaye iyakwazi ukunyuka phezulu. Ixabiso lesalathisi lingaphezulu kwe-50-day line SMA kunye ne-21-day line SMA ebonisa ukuba imarike iya kunyuka ngakumbi. I-SMA yeentsuku ze-50 kunye ne-21-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-NAS100 ikwintshukumo esecaleni. Ukunyuka okuphezulu kuye kwaphazamiseka ngokuchasana okuphezulu kwinqanaba le-16400. Ngezihlandlo ezintathu iinkunzi zeenkomo zaphuka ngaphezu kwenqanaba lokumelana kodwa zagxothwa. Ngomhla wama-27 kaDisemba, abathengi abaphumelelanga ukugcina ixabiso lingaphezulu kokuchasana okungaphezulu. Namhlanje, i-NASDAQ 100 iwela ngaphantsi kokuchasana okuphezulu.
Isalathiso siwele ngaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ifikelele kwingingqi ethengiwe ngokugqithisileyo. Abathengisi baya kuvela ukutyhala amaxabiso ezantsi. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-50 zithambekile ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
I-NAS100 ifikelela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike kwaye iphinda iqalise ukuthengisa uxinzelelo. Ukuhla kwangoku kunokufikelela kwinqanaba eliphantsi le-15450 Ukuba ixabiso liphule ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo.
I-NASDAQ 100 (NAS100) iRetests Level 16400 High, May Resume Downtrend
Isalathiso seNAS100 ikwindlela esecaleni kodwa inokuphinda iqale phantsi. I-NASDAQ 100 yayingaphambili kwi-uptrend. I-uptrend iye yapheliswa ukususela ngoNovemba 4. Kwinyanga edlulileyo, isalathisi siye saguquguquka ngaphantsi kwe-overhead resistance kwi-16,400 yeedola. I-uptrend iya kuphinda iqhube phezulu ukuba ukuchasana kwe-overhead kwaphulwa. Okwangoku, ngoNovemba 22 uptrend, i-candle body retraceed yavavanya i-50% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-NAS100 iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 ye-Fibonacci extension okanye inqanaba le-18861.50.
US 100 - Itshathi yeVeki
Isalathiso sikwinqanaba le-61 le-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba i-NAS100 yindawo yokunyusa kwaye iyakwazi ukuqhubela phambili. I-21-day kunye ne-50-day line-line ehambayo i-avareji ihla inyuka phezulu ibonisa ukunyuka.
Kwitshati yeyure yoSuku, i-NAS100 ikwintshukumo esecaleni. I-uptrend yangaphambili yapheliswa ngoNovemba 4 njengoko imarike iphinda iqalise ukuhamba ecaleni. Iinkunzi ziye zaphinda zaphinda zazama ukuxhathisa ngaphezulu kwezihlandlo ezine kodwa zagxothwa. Namhlanje, abathengi baphinde baqala ukuya phezulu ukuze baphinde bavavanye ukuxhathisa okungaphezulu. I-uptrend iya kuphinda iqalise xa ukuchasana kwinqanaba le-16400 kuphulwa.
I-NAS 100-Itshathi yemihla ngemihla
I-NAS100 ingaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Isalathiso ngoku sikwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike. Ukunyuka kwangoku kunokujongana nokunye ukukhatywa njengoko amaxabiso efikelela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Isalathiso sikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zithambekile ngokuthe tye ebonisa ukuhamba kwecala.
I-NAS100 ithengisa kwinqanaba le-16324.23 ngexesha lokushicilela njengoko inokuphinda iqalise i-downtrend. I-uptrend yangoku inokuthi ibhekane nokukhatywa kwinqanaba le-16400. Isalathiso sijongene nokugatywa njengoko siphinda siqalise ukuhamba-hamba.
I-NASDAQ 100 ikwiNdlela esecaleni, Ukuchasa iiDabi kwi-16400
Ixabiso leNAS100 iye yaphula ngezantsi i-avareji ezihambayo njengoko silwa ukuxhathisa kwi 16400. Ukususela ngoNovemba 4 uptrend iinkunzi kuseza kuqhawula ngaphaya kwenqanaba 16400 ukuxhathisa phezulu. Abathengi baye baphinda bavavanya ukuchasana okungaphezulu kwizihlandlo ezihlanu kodwa abakwazanga ukophula inkcaso. Isalathiso siya kuwa ngaphantsi okanye ngaphezulu kwee-avareji ezihambayo emva kokulahlwa ngakunye. Kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo, iikhandlela zinemisila emide ephumayo ekhomba kwinqanaba le-15600 inkxaso. Imisila emide ibonisa ukuba inkxaso yangoku yingcinezelo yokuthenga enamandla.
Isalathiso sikwinqanaba le-44 le-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba i-NAS100 iwele kwindawo ye-downtrend kwaye iwela phantsi. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zomyinge ezihambayo ziyathambeka ngokuthe tye ebonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwi-uptrend kodwa ibuyela kwicala elisezantsi. I-uptrend iya kuphinda iqalise xa ukuphinda kuphele. Okwangoku, nge-17 kaDisemba uptrend, i-candle body retraced yavavanya i-50% ye-Fibonacci yokubuyisela inqanaba. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-NAS100 iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-16200.69.
I-NAS100 ingaphezulu koluhlu lwe-25% yestochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zithambekile ngokuthe tye ebonisa ukuhamba kwecala.
I-NAS100 iphinde yaqala ukunyuka phezulu njengoko isilwa ukuxhathisa kwi-16400. I-uptrend inokwenzeka njengoko isalathiso sawela kwindawo ethengiswa kakhulu kwimarike. Isalathiso siya kuqalisa kwakhona intshukumo enyukayo xa iphula ngaphezulu kwenqanaba le-15900.
I-NASDAQ 100 (NAS100) Ibuyisela kwakhona iNqanaba le-15550, iqala kwakhona i-Uptrend
I-NAS100 iphinde yaphinda yaya phezulu njengoko ixabiso liyophuka ngaphezulu komndilili ohambayo. Abathengi batyhala isalathiso ukuba baphinde bavavanye ukuxhathisa kwinqanaba le-16750. Kwi-uptrend yokuqala, iinkunzi zagxothwa kwinqanaba eliphezulu le-16750. Imarike yehlile ukuya kwinqanaba elisezantsi le-15550. kwinqanaba 100.
Isalathiso sikwinqanaba le-54 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba i-NAS100 ikwindawo ephakamileyo kwaye iyakwazi ukunyuka phezulu. Ixabiso lesalathisi lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okunokwenzeka kwesalathisi.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwinyathelo eliya phezulu. I-uptrend ijongene nokuchasana kwinqanaba le-16405. Ikhefu ngaphezu kokuchasana kuya kuqhuba isalathisi ukuba iphakame phezulu. Okwangoku, nge-8 kaDisemba, i-candle body retraceed ivavanye i-61.8% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-NAS100 iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci yokwandisa okanye inqanaba le-16955.19.
NAS100 - 3 Itshathi yeYure
I-NAS100 ingaphezulu kwe-40% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
I-NAS100 iphinde yaqala ukuya phezulu. Isantya esiphezulu siya kuphinda siqale ukuba ixabiso liphule ngaphezu kokuchasana kwinqanaba le-16750. Okwangoku, i-NAS100 ithengisa kwinqanaba le-16284 ngexesha lokubhala.
I-NAS100 ikwintshukumo ezantsi. Isalathisi singaphezulu komgca we-50 weentsuku ze-SMA kodwa ngaphantsi kwe-SMA yeentsuku ze-21. I-NAS100 iya kuncipha ngakumbi ukuya kwinqanaba le-14400 ukuba iibhere ziyaphuka ngaphantsi kwe-50-day SMA. Ngakolunye uhlangothi, ukuba inkxaso yangoku ibambe, i-uptrend iya kuqalisa kwakhona. Ngaphandle koko, imakethi ifikelele kwingingqi ethengisiweyo kwaye irhoxile. Isalathiso sinokuthi siphinde sijonge iindawo eziphezulu zangaphambili. Ikhefu ngaphezu kwe-SMA yeentsuku ezingama-21 iya kubonisa ukuqaliswa kwakhona kwe-upside momentum.
Isalathiso siwele kwinqanaba lama-42 leSalathiso saMandla esiLalelanayo kwixesha le-14. I-NAS100 ikwindawo ye-downtrend kwaye iyakwazi ukuwela phantsi. Ixabiso lesalathisi liphakathi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa uluhlu olunokwenzeka lokuhamba.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwintshukumo esezantsi. Isalathiso siwele kwinqanaba le-15529 njengoko imarike ifikelele kwindawo ethengiswa kakhulu. Uxinzelelo lokuthengisa lunokwehla. Okwangoku, ngoNovemba 26 downtrend, i-candle body retraced yavavanya i-61.8% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-NAS100 iya kuwela kwinqanaba le-1.618 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-15469.56.
I-NAS100 ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-NAS100 ifikelele kwingingqi ethengisiweyo kwaye abathengi banyuse ixabiso. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-NAS100 ifikelele kwindawo ethengisiweyo. Kukho ithuba lokunyuka kwamaxabiso. Uxinzelelo lokuthengisa luphelile.